Tartaric Acid uyazi njengoba idayimane of wayini - China Hailan bio-technology
L-potassium ne-hydrogen tartrate
Tartaric Acid uyazi njengoba idayimane yewayini
Abstract: Vele uvule ibhodlela lewayini, ukhokho exhunywe izingcezu ezincane aminyene ingilazi ephukile, okuyinto tartaric acid, kukhona igama nice - iwayini amadayimane. Njengazo zonke acid organic, kuvela umbala isikhathi yamagilebhisi berry, kwakhiwa okuyinto yi kwezimila izingxenye green nezitshalo ngowomnikazi kwenze ka isibilile juice kwamagilebhisi, kodwa akuphazamisi ikhwalithi iwayini.
Igama elithi "tartar" ngoba ezinye abangane kungenzeka ezithile ongaziwa. "Tartar" kungani, is kwakheka kanjani?
Iwayini zinhlayiya - kumiswa tartar, isakhi esiyinhloko kuvela iwayini tartaric acid (Tartaric Acid), ngenxa yokuthi iwayini lilondolozwe endaweni ikakhulukazi abandayo. Ukuma zinhlayiya tartar, akukho emthethweni othile, futhi ngezinye izikhathi okunamathelayo, ngokuvamile enamathiselwe phansi ibhodlela, ehlombe noma avele ezansi ukhokho.
Izinga eliphakeme kunawo kwamagilebhisi ngaphezulu okuphekiwe, ayanda Ingxenye tartaric acid. Ukuqhubeka amagilebhisi sikhule emivinini, isikhathi eside isikhathi ukuncela amaminerali ngaphezulu enhlabathini, kanye nokumbiwa ukuthi sihlangana tartaric acid ukhiqiza tartar. Lezi zinhlayiyana ngeke afundziswe ngekuhlanganiswa iwayini, kodwa kwezulu iwayini ibhodlela odongeni, phansi ibhodlela, oki noma kwezulu ekuqaleni imiphongolo iwayini. iwayini White tartaric acid ukubukeka, ubukeka into efana ushukela omhlophe, kanye newayini elibomvu itshe crystal ke okubonisa zinhlayiya igazi-like onsomi, futhi akukho lula ukuthola i-asidi.
itshe Vintage akuphazamisi ikhwalithi iwayini. Nokho, kukhona ukuhlobana kakhulu: iwayini, inqubo ukuvutshelwa kuqhathaniswa kancane, iphunga elimnandi iwayini ivikelwe kahle. I kancane inqubo ukuvutshelwa okungukuthi, ngaphansi le tartar is ukugqashuka in the ibhakede futhi kulapho kuba ibhodlela. Ngenxa yalokho, i-tartar egabheni kungenzeka uphawu umsebenzi omuhle kakhulu winemaker kanye izinga enhle kakhulu iwayini.
Iwayini ngaphakathi crystallization akuyona inkinga izinga, akusiyo ingozi kuphela, kodwa iwayini Inqubo ukuvutshelwa kanye nenqubo abavuthiwe, ikakhulukazi inqubo ukuvuthwa uyoveza izinto, kuwuphawu iwayini ovuthiwe. Ngenxa umthelela iwayini ukunambitheka impahla engazinzile wahlukaniswa iwayini, ukuze iwayini iba uhlambulukile, uzinze ukunambitheka isakhiwo, ukunambitheka kanye Lubrication mellow ngaphezulu. Kuphela izinga okusezingeni eliphezulu izinga iwayini uzoba kwenze okungukuthi tartar. Hlanza, iwayini esobala zingaphinda zivele inzika - itshe crystal (Wine Okunamandla). Uma iwayini ivela Esimweni esinjalo, ngeke kuthinte ukunambitheka iwayini, kodwa ngemva kokwakhiwa itshe crystalline ayikwazi ziyoncibilika ukubuyisela.
I "gem" e iwayini ayatholakala iwayini abasha, okuyinto efakazela ukuthi isilinganiso samaminerali iwayini eliphezulu ikakhulukazi. Kodwa iningi labo zisekhona amadala, izinga okusezingeni eliphezulu ikakhulukazi iwayini. Uma tartar is ukugqashuka phezu isivalo se-okhi * noma ibhodlela, kuyisibonakaliso wesitoreji isikhathi eside. Ochwepheshe bakubiza ngokuthi "tartar ubudala", crystallization ezinkulu, kancane ekhiqizwa ngokuhamba kwesikhathi.
isikhathi Iposi: Mar-28-2017
Ifeksi: + 86-0563-2062866
FIC Izithako China 2017